I-Olomouc city center 1-bedroom Luxury design flat - I-Airbnb
I-Olomouc city center 1-bedroom Luxury design flat
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCathrine
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukuvuselelwa, ekwicomplex enembali ekwicomplex ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex Ikhaya elikhanyayo nelingena umoya, elinefenitshala esekhaya elinokufikelela ngqo kwizinto ezinokusetyenziswa esixekweni. Le flethi ilungele abantu abayi-2 kodwa inokwamkela iindwendwe eziya kutsho kweziyi-4.
I-60 sqm indawo yegumbi lokulala elinye embindini wedolophu enembali, kwisakhiwo esiyi-2020 belle epoque, esinefenitshala epheleleyo kunye nazo zonke izinto eziluncedo zale mihla. Kukho igumbi lokulala elipholileyo elingasemva kweflethi okanye indlu ekwicomplex kunye nendawo yokuhlala evulekileyo enesofa entsha netofotofo. Itafile yokutyela ihlala lula iindwendwe eziyi-4. Ikhitshi limiselwe ngokupheleleyo ngomatshini wekofu weNespresso kunye neoveni/i-hob epheleleyo kunye ne-microwave nazo zonke izinto ezisisiseko zasekhitshini. Igumbi lokuhlambela losapho elineshawa . Zonke izinto zebhedi ziyafumaneka.
Unxibelelwano lwe-Wifi olungenamda i-50 MB/S kuyo yonke iflethi.
Iflethi ixhotyiswe nge-Smart TV apho unokufikelela khona kwi-akhawunti yakho ye-Netflix, i-Amazon Prime, i-Spotify njl...okanye i-airplay/i-chromecast content ngqo kwisixhobo sakho.
Iflethi isembindini wedolophu, iikhilomitha eziyi-300 ukusuka kwisikwere esiyintloko i-Namesti, kwaye inazo zonke izinto onokuzisebenzisa. Ipaki eluhlaza ibekwe emva nje kwesakhiwo. Kukho ivenkile enkulu evula ngo-7 kusasa ukuya kutsho ngo-9 emva kwemini ekumgama we-150m kuphela.
Ukupaka: ukupaka esitratweni kwi-Kollarovo namesti kudla ngokufumaneka kwaye kubiza i-30K/iyure phakathi ko-9 kusasa no-6 emva kwemini kwiintsuku zomsebenzi. Ayibhatalelwa ngexesha lokuphela kweveki neeholide zebhanki.
Umbuki zindwendwe ngu- Cathrine
Ixesha lokungena liphakathi ko-3pm no-9pm kwaye ixesha lokuphuma lingaphambi ko-11am.
Mna noZuzka noAnna siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Olomouc